Homeसमाचारसुन्तला खानुका बेफाइदाहरु यस्ता छन् जान्नुहोस्
November 28, 2020 admin समाचार 6198
जाडोको मौ’सममा सुन्तलाको मौसम हुने भए’काले घाममा बसेर सुन्तला खाने गरिन्छ । सुन्तलामा पोटा’शियम, भिटामिन सी, फ्लेबो’नोइड्स र फा’इबर जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । जुन स्वास्थ्य’का लागि निकै फाइदा’जनक हुन्छ । यसका साथै सुन्तला मुटु’लाई स्वस्थ्य राख्ने र रोग प्रतिरोधा’त्मक क्षमता बढाउन पनि फाइदा’जनक हुन्छ । तर, कुनै कुनै समयमा सुन्तला स्वा’स्थ्यका लागि बे’फाइदा पनि हुन्छ ।
सुन्तला भिटा’मिन सीको प्रमुख स्रोत हो । यसले चिसोमा रुघाखो’कीबाट बचाउँछ । तर यसमा भारी मात्रामा हुने भिटामिन सीले शरीरमा क्याल्शिय’मलाई असर पुर्याउँछ । जसले हाडजो’र्नी सम्बन्धी समस्याहरु पैदा गर्न सक्छ । यसका साथै, धेरै सुन्तला खाँदा आँस्टियो’पोरोसिसबाट पीडित हुने सम्भा’वना बढी हुन्छ । त्यसैले सही मात्रामा सुन्तला खाने गर्नुपर्छ ।
रगतमा चिनी’को मात्रा बढ्छ
बिहान खाली पेटमा सुन्त’लाको जुस पिउँदा रग’तमा चिनीको मात्रा बढ्छ ।
भिटामिन सीबाहेक सुन्तलामा फा’इबर भारी मात्रा हुन्छ । जसले पेटसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या’हरु आउँछन् । धेरै फाइबर खाँदा पेटमा समस्या आउँछ ।
भिटामिन सीले शरीरमा मेटाबो’लिज्मलाई स्वस्थ बनाएर राख्छ । तर भिटामिन सीको मात्रा धेरै खाँदा मेटाबोलिज्मलाई बि’गार्न पनि सक्छ । जसले तौल सन्तुलित हुने प्रक्रि’यालाई ढिलो बनाइदिन्छ । जसले तौल बढ्ने स’मस्या बढ्छ । धेरै सुन्तला खाँदा फाइबर र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढ्छ । जसले भोक लाग्ने र तौल स’न्तुलन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
एसिड रिफ्ले’क्सको चिन्ता
खाली पेटमा सुन्त’ला खानुहुँदैन । खाली पेटमा सुन्तला खाँदा एसिड बढ्ने र दि’नभर ग्यास, छात्ती पोल्ने, मुड खराब हुने, डकार आउने सम_स्या आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिले दिनमा १ वा दुईवटा भन्दा बढी सुन्तला खानुहुँदैन । खाली पे’टमा सुन्तलाको जुस खानुहुँदैन ।-रातो पाटी बाट
धर्मशास्त्र : सह गोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन बिहे? यस्तो छ कारण
आज मिति२०७७ माघ २ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
January 15, 2021 admin समाचार 4529
मेष : मेष राशि भएका’हरूका आज स्वास्थ्यको हिसावले खराव रहेको छ । घुँडा दुख्ने, शरीर दुख्ने, रुघाखोकीले पनि हैरान पार्ने अवस्था छन् । त्यस’कारण उमालेको पानी पिउने, खाना तातो खाने, शरीरलाई चिसोबाट जोगाउनु पर्नेछ ।
May 17, 2021 admin समाचार 3501
कोराना भाइरसको संक्र’मणबाट नेपाल प्रहरीका एकजना सहा’यक निरीक्षक (असई) को मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश दंगा नि’यन्त्रण गण सु’नवलमा दरबन्दी रही जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत असई शम्भुलाल दमाईको का’रोना संक्रम’णबाट मृ’त्यु भएको हो। ४५
सुन्दा अ’चम्म लाग्ला तर यो सत्य हो, पल शाहले गरे वि’बाह ! को हुन् त बेहुली? (भिडियो सहित)
April 23, 2021 admin समाचार 2742
यो दृश्य हो बाग’लुङको हाे उनी दुर्गेश थापा सँगै उनको घर गाएका थिए। दुर्गेश पढेको स्कुलमा ना’एक पल शाहलाइ सम्मान कार्यक्रम गरिएको थयो। कार्यक्रममा पल शाह, समीक्षा अधिकारी, सागर,वसन्त थापा, दुर्गेश थापा ल’गाएत अन्य कला’कारहरु
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220452)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212111)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211810)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210558)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209344)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208467)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206944)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206733)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175642)